जानकारी Archives - Page4of 34 - कृषि पत्रिका
शनिबार २५ साउन, २०७६
अंजीर, फिकस कारिका, मानिस जातिलाई चिनिने पुरातन फलहरूमध्ये एक हो जसको बाइबलमा उल्लेख भेट्टाउँन सकिन्छ। यो पूर्वी भूमध्य क्षेत्रमा २००० BC देखि खेती भइरहेको बताइएको छ। यो फल अनौंठो छ। धेरैजसो ‘फल’ जस्तो नभई, जसमा संरचना अण्डाशयको ऊतकमा परिपक्व हुन्छ, यसको खाद्य संरचना वास्तवमा एक स्टेम टिश्यू हो। यसको फल एक उल्टो फूल हो जुन […]
प्लाष्टिक ट्रेमा बेर्ना उत्पादन गर्ने प्रविधि र त्यसका फाईदा
मङ्गलबार २१ साउन, २०७६
कृषकले एउटै जमिनलाई लामो समयसम्म नर्सरीको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रथाले पनि रोग कीराको प्रकोप बढाउनुको साथै बेर्नाको गुणस्तरमा ह्रास आई उत्पादन र गुणस्तरमा गिरावट आइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा परम्परागत बेर्ना उत्पादनको विकल्पको खोजी विगतदेखि नै भइरहेको छ । यसको बिकल्प भनेको पछिल्लो समय प्रचलनमा आएको प्लास्टिकको ट्रेमा बेर्ना उत्पादन प्रविधि हो। कोकोपिट जुन नरिवलको […]
शालग्राम अधिकारी शनिबार ११ साउन, २०७६
कुनै पनि बिरुवाको जरा माटोभित्र फैलिएको हुन्छ । जराले माटोलाई समाउँछ र जमीनमा खडा हुन्छ । जराद्वारा नै तरकारीका बोटबिरुवाहरुले माटो भित्रबाट विभिन्न पोषकतत्वहरु प्राप्त गर्दछन् । माटोमा भएको चिस्यानमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न खनिज तत्वहरु घुलनशील अवस्थामा रहन्छन् । यी तत्वहरु बोटका जराले शोषण गरेर लिन्छन् र बोटका विभिन्न भागहरुमा पुरयाउँछन । त्यसकारण माटोको […]
भरतराज गौतम शुक्रबार १० साउन, २०७६
नेपालमा पछिल्लो समयमा गाई पालन व्यवसायिक रुपमा फैलिदै गएको छ । नेपालमा परम्परागत जातका गाईदेखि जर्सिगाईको व्यवसायिक रुपमा पालन सुरु भएको छ । योसँगै दूध उत्पादनको क्षेत्र पनि फराकिलो भएको छ । यहाँ हामीले गाई पालनका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउने जमर्को गरेका छौं । यो जानकारीबाट आधुनिक तथा व्यवसायिक रुपमा गाई […]
गोलभेडालाई ताजा राख्ने ? त्यसो भए यो प्रविधि अपनाउँ
आइतबार ०५ साउन, २०७६
सबैको भान्छाघरमा खानाको स्वाद बढाउने एउटा कमन तरकारी हो, गोलभेडा । यो गोलभेडाको स्वाद ताजा रहँदासम्म मात्रै मिठो हुन्छ । गोलभेडा पुरानो हुँदै गएपछि यसको स्वाद विग्रदै जान्छ । फ्रिजमा पनि तीन चार दिनसम्म मात्र यसको स्वादलाई मिलाएर राख्न सकिन्छ । तर चिन्ता मान्नु पर्दैन, अब गोलभेडालाई ३० दिनसम्म ताजा राख्न सकिन्छ । भारतको हैदरावादस्थित […]
के हो अगरवूड, जसको एउटै रुखको मूल्य १० औं लाख पर्छ
शनिबार २८ असार, २०७६
अगरवूड (Aquilaria tree)संसारको सबै भन्दा महँगो रुख हो। अगरवूड विरुवा विविधता पूर्ण भौगोलिक वातावरण भएको ठाउमा पाइन्छ । उत्तर पूर्वी भारत देखि मलेसिया,म्यानमार,इन्डोनेसीया,कम्बोडिया,थाइल्याण्ड जस्ता विभिन्न देशहरुमा यो विरुवा पाउन सकिन्छ ।भारतमा धेरै मात्रामा आसाममा यो विरुवाको खेति भइरहेको छ । यो सामान्यतया समुन्द्री सतहबाट १८०० मिटरको उचाईसम्म हुर्कन्छ ।यस बाहेक पनि अन्य ठाउमा कृत्रिम तरिका […]
एउटा रुखबाटै १० औं लाख कमाउन सकिने पाउलोनिया खेती गर्ने हो ? तु-सम्पर्क गर्नुहोस्
शनिबार २१ असार, २०७६
पाउलोनिया एक थोरै लगानी मा धेरै लाभ लिन सकिने र संसारमै छिटो बढने रुख हो । पाउलोनिया बनस्पति छिटो बढ्ने, डाले घास, सोत्तर पतकर र वायु प्रदूषण कम गर्न भूक्षय रोक्न मद्दत गर्ने बहुउपयोगी, पतझड जातको रुख हो । जस्तो ठाउँमा पनि हुर्कन सक्ने, हुर्कौउन गाह्रो नहुने बिरुवा बएस्क भएपछी ३० मि सम्म अग्लो हुन […]
सावरसोप लाई ग्रभायोला पनि भनिन्छ । सावरसोप सधा हरियो रुखको रुपमा रहन्छ । यसको बैज्ञानिक नाम (Annona muricata) हो भने यसको परिवार अन्नोनासीहो । यसको फल काँडा भएको हुन्छ र यो खान योग्य हुन्छ। सावरसोप प्राकृतिक रुपमा धेरैनै बिस्तारै बढ्ने रुख हो । समुद्री सतहबाट एक हजार मीटरसम्मको उँचाइमा खेती गर्न सकिने यो फलको रूख मध्यम […]
जुकिनी फर्सी अर्थात स्क्वासको खेती गर्ने सजिलो तरीका
मङ्गलबार १० असार, २०७६
स्क्वास फर्सी बाली वा लहरे बाली समूह अन्तर्गत पर्ने एक अगौटे तरकारी बाली हो। नेपालमा जुकिनी समूहका जातहरुको खेती गरिने भएकोले यसलाई जुकिनी स्क्वास वा जुकिनी फर्सी पनि भन्ने चलन छ। स्क्वास फर्सीको विशेषता के हो ? यसको बोट होचो हुन्छ, फल पनि सानो हुन्छ र लहरा जाँदैन। यसको बढ्ने एउटै मात्र मुण्टा हुन्छ। कलिलो […]
अव यसरी गरौं, बाख्रा पालन
यमुना कुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ वैज्ञानिक (एस ४) शनिबार २५ जेठ, २०७६
बाख्रा पालन व्यवसायमा अत्यन्त लाभदायक साना कृषकहरूले समेत सिमित पूँजिमा पाल्न सक्ने भए पनि यसलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिएको छैन । फलस्वरुप नेपालमा वर्षेनी २० लाखको हाराहारीमा खसीबाख्राहरू विदेशबाट मासु आपूर्तिको लागी भित्रिएको पाईन्छ । तसर्थ व्यवसायिक रुपमा बाख्रा पालन गरी विद्यमान आयतको संख्या न्यून गर्न बाख्रा पालनका विभिन्न पक्षहरू जस्तै गोठ/खोर व्यवस्थापन, आहारा, प्रजनन र […]